February 2009 edited March 2009 in Other
ning နဲ့ ၀က်ဆိုက်လုပ်တာ ဖိုရမ်တွေ ကိုဘယ်လို၀င်ပြင်ရလဲဗျ
ဥပမာဗျာ-VB ဆိုရင် VB နဲ့ပတ်သတ်တာပေါ့ Java ဆိုရင် Java ပေါ့
အဲလိုမျိုး သူအပိုင်းနဲ့သူပေါ့ ဗျာ ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ဘယ်ထဲ၀င်ပြင်ရတာလဲ မသိဘူးဗျ
ပြီးတော့ Chat လဲထည့်ထားသေးတယ် ၀င်လိုက်တိုင်း မရဘူး ဘာလုပ်အုံးမှာလဲ:77::77:
ဒီအစ်ကိုတစ်ယောက်ဆီမေးလ်ပို့ပြီးမေးကြည့်လိုက်ပါ။ သူက နိုင်မှာအတွေ့အကြုံတော်တော်ရှိတယ်။ သူ့ဆီကို မေးလ်ပို့လိုက်ပေါ့။ မတတ်လို့တတ်နိုင်သလောက်ကူညီတာပါခင်ဗျာ......
ကျွန်တော်စမ်းဖူးတာတော့ ကျွန်တော့်တို့ MZ လိုမျိုး Forum ကို Category တွေခွဲဖို့ အဆင်မပြေဘူးဗျ။ အဲ့လိုမျိုး VB ဆို VB၊ JAVA ဆို JAVA သတ်သတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ reply ဆိုတာကို ထပ်ထပ်ပြီးရေးသွားမှပဲ ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကို ကိုကို၀င်းပြောသလို ဆက်သွယ်ကြည့်လိုက်ပါလား။ အဆင်ပြေသွားရင်လည်း အကြောင်းကြား ပါအုံးနော်။ ကျွန်တော်လည်း ning ကို စမ်းသပ်နေလို့ပါ။
p.s မှားတာပါရင် တောင်းပန်ပါတယ်။ :77: :77: :77:
အာ.. အစ်ကို ကလဲ .. WP.. တို ့.. phpbb3 တို့MK တို့SMF တို ့ဖရီးပေးတာဘဲ
အဲတာ နဲ ့လုပ်ပေါ ့. တတ်နိုင်ရင်တော့vbulletion ကိုင်ပေ ါ့.. ning က ဘာလုပ်ဖို ့လဲ
အမှားပါရင် ခွင် ့လွှ့တ်နော်.. တတ်သလောက် ၀င်ဖော တာပါ..
can't consider why do ya wish to cr8 ur site in ning.com
it has loz of vulnz.
so, if ya wish, juz cr8 with some other free forums:)
I also don't like ning.com ..... There are many free scripts available. I would do with free php scripts such as SMF, PHPBB for forums
and I would choose one of the following scripts instead forasocial networking site. They all are free.
co.cc မှာတော့တစ်ခါလုပ်ဖူးတယ် ဘာလုပ်ရမလဲမသိလို့ page တွေကိုကိုယ်ဟာကိုရေးရတာလား
လုပ်ပါအုံး ကူကြပါအုံး ကယ်ကြပါအုံး
ကျွန်တော် ကတော ့http://byethost.com (free hosting ) မှာ အကောင့်လုပ်တယ်..
မြန်မာ ကတော့အကောင် ့လုပ်လို ့မရဘူး... over sea က တစ်ယောက် ကို လုပ်ခိုင်းတယ်
အကောင် ့ရတာ နဲ ့.. Data base ..တွေ ဖြည် ့.. Domain နာမည် ကြိုက်တာ ရွေး..
နောက် . ကြိုက်တဲ့forum.. Blog.. wiki. ကြိုက်တဲ့package ကို တင်.. အားရပါးရ ကလိ
အဲလို တော ့လုပ်တတ်တယ်.. ဟီးး ..
အဲဒါကတော့phpbb3နဲ ့ကလိထားတာ..
သူငယ််ချင်းတွေ နဲ ့ကလိ ထားတာ..
http://yournetworkname.ning.com/forum/manage ကနေ add another category ကိုသုံးပြီး လိုချင်တဲ့ အမည်တွေပေးလိုက်ပါ။ နောက်တော့ yournetworkname.ning.com/forum အောက်မှာ MZ မှာလုပ်ထားသလိုမျိုးတွေ့ရမယ်။ နောက် main page ကဆွေးနွေးချက်တွေမှာလဲ ဘယ်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရေးထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမယ်။ နောက် ဆွေးနွေးချက်အသစ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ yournetworkname.ning.com/forum ကနေဝင်ဖွင့်နိုင်သလို main page ကနေ new discussion ယူတဲ့အခါ drop down ကတစ်ဆင့် ဘယ်ကဏ္ဍအောက်မှာဖွင့်မယ်ဆိုတာကို user ကရွေးပေးရမယ်။ နောက် topic မှားဖွင့်ထားတဲ့သူတွေကို သက်ဆိုင်ရာ category အောက်ပြန်ရောက်သွားဖို့ administrator အနေနဲ့ပြင်နိုင်စေဖို့ ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ရင် သက်ဆိုင်ရာ category ကိုဖော်ပြတဲ့နေရာဘေးနားမှာ (change) ဆိုတာပါလာမယ်။ အဲ့ဒီကနေသက်ဆိုင်ရာ အောက်ကိုပြန်ရွှေ့ပေးလိုက်ရုံပဲ။ ကိုယ့် သူငယ်ချင်းတွေကို ကိုယ်နှစ်သက်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ပေးပြီး ဆွေးနွေးချက်တွေကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ရင် သူတို့လဲပြောင်းပေးလို့ရတယ်။ ning ကပေးတဲ့ chat box ကတော့ မြန်မာပြည်နဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်က webchattr ကိုသုံးထားတယ်။ သူက ning နဲ့ကောင်းကောင်းအဆင်ပြေတယ်။ နောက်တစ်ခုသိသေးတာက meebo.. သူလဲအဆင်ပြေတယ်။ embed code ထုတ်ပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာလို မပေါ်နိုင်တာက အခက်အခဲတစ်ခုပဲ။ webchattr ကတော့မြန်မာလိုလဲပေါ်တယ်။ user တိုင်းရဲ့ profile page မှာလဲထည့်ထားပေးလို့ရတယ်။ အကုန်ပဲဗျာ.. ning နဲ့တော့တော်တော်အဆင်ပြေတာတွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့တုန်းကလဲ chat box ထည့်ချင်တာတော်တော်ကြာသွားတယ်။ အဆင်ပြေပါစေဗျာ..